Telefishanka beIN Sports Oo Magacaabay Wariyaha Tabin Doona Kulanka Caawa Ee Man City vs Lyon - Gool24.Net
Telefishanka beIN Sports Oo Magacaabay Wariyaha Tabin Doona Kulanka Caawa Ee Man City vs Lyon
August 15, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Telefishanka ciyaaraha beIN Sports ayaa shaaciyey wariyaha uu u doortay inuu tabiyo kulanka ugu dambeeya wareegga siddeedda tartanka Champions League oo ay isku haleelayaan kooxaha Manchester City iyo Lyon.
Saddexda kooxood ee Bayern Munich, RB Leipzig iyo PSG ayaa iska xaadiriyey semi-finalka, waxaanay sugayaan kooxdii kusoo afrayn lahayd oo caawa lagu go’aamin doono magaalada Lisbon.
Bayern Munich waxay soo karbaashtay Barcelona oo ay kusoo dhufatay 8-2, RB Leipzing waxay waddo cad soo marisay Atletico Madrid oo ay 2-1 kusoo dhufatay halka PSG uu nasiibku si weyn u caawiyey oo ay 2-1 kaga adkaadeen Atalanta iyagoo goolashana helay shantii daqiiqadood ee ugu dambaysay.
Manchester City iyo Lyon midkooda soo gudba, waxay semi-finalka ku sugaya imtixaankii ugu weynaa oo ah Bayern Munich oo la ogaa sidii ay u xasuuqday Barcelona, laakiin tababare Pep Guardiola oo saddex sannadood soo layliyey kooxda reer Germany ayaa la saadaalinayaa inuu soo dhaafi doono Lyon oo uu markii ugu horreysay ka hor tegi doono naadigiisii hore oo ka awood badan sidii uu ku ogaa.
Telefishanka beIN Sports qaybtiisa carabiga ayaa magacaabay wariyaha ku qoran tabinta kulanka caawa, waxaana mid usoo nastay oo xog badan kasoo ururiyey labada kooxood ee uu ciyaartooyda tacliiqinayo.
Wariyaha khabiirka ah ee codka macaan ee Cusaam Shuwaali ayaa loo doortay inuu qabto ciyaartay kaddib nasasho uu kusoo jiray maalmihii ugu dambeeyey, waxaana uu ugu dambayntii nasiib u yeeshay inuu qabto ciyaarta ugu dambaysa wareegga siddeedda.
Cusaam Shuwaali oo ah wariye cod macaan, khibrad badan oo aqoon badan u leh ciyaartoyda kooxaha, waxa lagu yaqaanaa luuqaddiisa gaarka ah ee balaaqadu ku ladhan tahay, taas oo soo jiidata cid kasta oo maqasha.